High School Physics | 360ed
Dat Thin Pone High School Physics
Follow these steps to use this High School Physics (Grade 10) App:
High School Physics (Grade 10) App ကိုသုံးနိုင်ရန် အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
Download Datthinpone High School Physics App
၁. Datthinpone High School Physics App ကို Download ဆွဲပါ။
2. Try each of six sections.
၂. Sections ၆ခုမှ တစ်ခုချင်းစီကို သုံးကြည့်ပါ။
3.Some of each section are given free. If you want to have access all, you will need to scan the activation code from the box. Buy the flashcards box and activation code here.
၃. Section တစ်ခုချင်းစီမှ အပိုင်းအချို့ကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးကို သုံးခွင့်ရလိုပါက ဗူးတွင်ပါဝင်သော Activation code (QR code) ကို Scanဖတ်ပါ။
Flashcards ဗူးနဲ့ Activation Code ကို ဒီလင့်ခ်(link)ကိုနှိပ်ကာ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ (လေးဖက်မြင်ပုံရိပ်ယောင်ရုပ်ကြွအပိုင်း)
Scan these cards and enjoy studying physics with 4D models.
အောက်ပါကတ်များကို Scan ဖတ်ပြီး ဓာတုဗေဒကို 4D models များနဲ့အတူ လေ့လာကြည့်ပါ။
→ (If you want to scan other AR cards from the box, you would need to scan activation code (QR code). Buy Cards and Activation Code here)
ဗူးမှ အခြား AR ကတ်များကို Scan ဖတ်ကာ လေ့လာလိုလျှင်Activation Code ကို Scan ဖတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Study Chapter 1 as demo chapter with pictures, graphics, translated definitions & vocabulary with English pronunciation, and lessons. Bonus: try links to exercises, video, test section and interactive features.
ရောင်စုံပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်ပုံများ၊မြန်မာ ဘာသာဖြင့်ရှင်းပြထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ သင်ခန်းစာများ၊ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်များနဲ့အတူ Grade (10) Physics မှ Chapter (1) ကို နမူနာအဖြစ်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Chapter section မှ သူနှင့်သက်ဆိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ videos များနှင့် features များကို သွားရောက်နိုင်အောင် လင့်ခ်ချိတ်ပေးထားသော features များကိုလည်း စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
→ (If you want to have access to other chapters, buy activation code here and scan it.)
(Chapter (1) မှလွဲပြီး အခြား Chapters များကို လေ့လာလိုလျှင် Activation Code ကို Scan ဖတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Activation Code ၀ယ်ယူရန် လင့်ခ်………………….)
Test your proficiency of Chapter 1 for free and receive immediate feedback for your answers.
(Chapter (1) နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်ပြီလဲဆိုတာ စမ်းသပ်ဖြေဆိုပြီး ရလဒ်များကို ချက်ချင်းကြည့်ရှူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။)
→ (For exam section and other chapters, you will need to buy activation code here and scan it.)
(Exam Section နှင့် အခြား Chapters များကို လေ့လာလိုလျှင် Activation Code ကို Scan ဖတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Activation Code ၀ယ်ယူရန် လင့်ခ်………………….)
Practice physics questions based on and divided by each concept and topic, not by chapter. You will experience different questions types to practice in accordance with Matriculation Examination question form.
Chapter လိုက်မဟုတ်ပဲ Chapters ထဲတွင်ပါဝင်သော Concept များနှင့် ခေါင်းစဉ်များအလိုက် မတူညီသော မေးခွန်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမေးခွန်းပုံစံတွင် မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းပုံစံများနှင့် လေ့ကျင့်ဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
More by 360ed